Ny làlana mankany amin'ny varotra maoderina | Martech Zone
Tiako ny marketing sy izay rehetra asehony. Raha ny fahitako azy, manokana ny marketing satria mampivondrona talenta sy anton-javatra maromaro izy io:
Fihetsika ataon'ny olombelona - maminavina ny fihetsiky ny olombelona ary mahatakatra ny zavatra tadiaviny sy ilainy izay mitarika izany fihetsika izany.
famoronana - mamorona hevitra vaovao izay tsotra sy tsara tarehy, miresaka ny fankasitrahan'ny olona ny hatsarana.
Analysis - famakafakana ny valin'ny data mba hahitana fotoana hanatsarana sy hitomboan'ny valiny.
teknolojia - fampiharana teknolojia handrefesana, hanatsarana ary hamerenana ny ezaky ny varotra.
Tonga amin'ny vanim-potoana Golden marketing izahay izay ahitan'ny kanto sy ny siansa izany fitoviana lavorary izany. Ny fahaizana mandrefy dia mihaona amin'ny fahaizana mamakafaka ny dikan'ny metrika. Ary ny angon-drakitra dia tsy vitan'ny hoe mitondra fanapahan-kevitra tsara kokoa fotsiny, fa koa manafaka ny mpivarotra mba ho sahy kokoa, hanandrana, hizaha ny sisin'ny fantsona fanta-daza ary hiditra amin'ireo fanapahan-kevitra vaovao. Avy amin'ny Eloqua's Infographic, Ny làlana mankany amin'ny varotra maoderina
Ahoana no nahatongavantsika teto?
Tags: datytantara-barotratantaram-barotramarketing maoderina